Muxuu Lake Baikal caan ugu yahay? Xiriirkeeda saadaasha hawada | Saadaasha Shabakadda
Muxuu Lake Baikal caan ugu yahay?
Jarmal Portillo | | Ciencia, Kala bixid
Marar badan oo nolosha ka mid ah waxaa la yiraahdaa in xaqiiqadu ay ka shisheeye tahay khiyaaliga. Dabeecaddana waxaa jira xaalado gaar ah oo meelo leh qurux aan caadi aheyn ama qurux gaar ah sababo la xiriira astaamahooda, flora qalalan iyo fauna ama maxaa yeelay dhacdooyinka dabiiciga ah ee ugu layaabka badan adduunka ayaa ka dhaca iyaga.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadli doonaa Harada Baikal. Haradaani waa tan ugu caansan adduunka sababo badan awgood. Muhiimad weyn ayey u leedahay saynisyahannada iyo dalxiisayaasha sidoo kale. Ma rabtaa inaad ogaato sababaha ay muhiim u tahay iyo sida ay u tahay wax aan caadi ahayn?
1 Asalka iyo astaamaha Harada Baikal
2 Muhiimadda Harada Baikal
3 Xiisaha harada Lake Baikal
4 Dalxiiska Harada Baikal
5 Harada Baikal iyo isbedelka cimilada
Asalka iyo astaamaha Harada Baikal
Haradaani waxay leedahay asal ahaan tectonic. Tan macnaheedu waxa weeye waxaa sababay dhaqdhaqaaqyada taarikada tectonic ee ka jirta Dunida (si aad wax badan uga ogaato taarikada tectonic akhri lakabyada gudaha ee Dhulka). Waxay ku taalaa gobolka koonfureed ee Siberia, Russia, inta udhaxeysa Irkutsk Oblast ee waqooyi-galbeed iyo Buryatia ee koonfur-bari, oo u dhow magaalada Irkutsk. Waxaa loo yaqaanaa "Blue Eye of Siberia" y "Luulkii Aasiya".
Abuuritaanka Harada Baikal waxaa lagu qiyaasaa inay dib u dhacday qiyaastii 25-30 milyan oo sano. Eray ahaan juqraafi ahaan waxaan dhihi karnaa ma aanan helin harada ugu da'da weyn taariikhda.
Tani waa muhiimadda ay u leedahay haradaas oo loogu magac daray Goobta Hidaha Adduunka ee Unesco sanadkii 1996. Waa mid ka mid ah harooyinka ugu daruuraha yar adduunka (sidaa awgeed naanaysta loo yaqaan 'Blue Eye'). Cudur darrada waxaa lagu cabiraa saxannada Secchi. Cajaladahaan ayaa suurtogal ka dhigaya in la ogaado xaddiga shucaaca iftiinka ee ka soo gala biyaha sidaasna lagu ogaado iftiinka. Hagaag, xaddiga iftiinka ee gaara qoto dheer ayaa la cabiray astaamaha nalka ayaa la duubay ilaa 20 mitir oo qoto dheer.
Haradaani sidoo kale waxay u taagan tahay hareeraheeda 20% oo ah biyaha macaan, ee aan barafeysanayn meeraha (qiyaastii 23.600 km3 oo biyo ah). Waxay qaadi kartaa biyo aad u badan maadaama ay aad u qoto dheer tahay maxaa yeelay waxaa quudiya 336 wabiyaal. Cabirka Harada Baikal waa: Dusha sare 31.494 km,, dhererkiisa 636 km, balac dhan 80 km iyo qoto dheer 1.680 m.
Harooyinka Baikal ee barafoobay. Xigasho: http://www.rusiamia.com/rusia/turismo/lago-baikal-rusia/
Dabeecad kale oo ka dhigaysa mid gaar ah ayaa ah in ay tahay harada kaliya ee ay jiingaddeeda aysan wax yeelin glaciers-ka qaarada in kasta oo ay tahay haro sare oo latitude ah. Daraasado ayaa lagu sameeyay qubuuraha harada waxaana lagu qiyaasay in hadii dhamaan sariirta ku uruurtay 25-30 milyan sano laga saari lahaa, harada gaari laheyd moolka ilaa 9 km.
Harada waxaa gebi ahaanba ku wareegsan buuro (sidaa darteed xaqiiqda ah inay leedahay qulqulo aad u tiro badan) oo farsamo ahaan loo ilaaliyo inay tahay jardiin qaran oo lagu ilaaliyo waxayna leedahay ilaa 22 jasiirado yaryar. Jasiiradda ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Olkhon waxayna dhererkeedu dhan yahay 72 km.
Muhiimadda Harada Baikal
Haradaan, sidaan horayba u soo sheegay, waxay leedahay ahmiyad weyn oo diirada lagu saaray laba qodob oo kala ah: goob booqasho iyo dalxiis lagu sameeyo ama saynisyahano ahaan oo aad ka ogaan karto astaamaha gaarka ah ee ka dhigaya mid gaar ah.
Sifada ugu horeysa ee muhiimad weyn u leh bulshada cilmiga leh ayaa ah in hal haro sida tan oo kale ay kujiraan 20% kaydka biyaha macaan ee meeraha oo dhan. Haddii ay dhacdo in waa 336 wabiyaal joojiso bixinta biyaha iyo quudinta, harooyinka ayaa qaadan lahaa ilaa 400 oo sano oo lagu faaruqiyo habka uumiga. Mid ka mid ah xisaabinta ugu xiisaha badan ee ay saynisyahannadu sameeyeen ayaa ah haddii dadka adduunka oo dhan la siin lahaa haradaas oo keliya, waxay noolaan karaan 40 sano mana lahaan doonaan dhibaatooyin biyo la’aaneed.
Hufnaanta biyaha aan kor ku soo xusnay ayaa iyaduna gaar ka dhigaysa. Dhibaatada yar ee haysata waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in noolaha ku nool biyahiisa taas ku nadiifi biyaha dhexdooda oo nadiifin fiican samee. Daraasadaha qaarkood ayaa la sameeyay si loo arko haddii noolaha noocan ah loo isticmaali karo in lagu nadiifiyo saliidda ku daadata biyaha kale sababo la xiriira heerka isdaahirinta ee sarreeya.
Biyaha nadiifka ah waxaa loo isticmaalaa daweynta caafimaadka qaarkood, gaar ahaan cuntooyinka qaar oo ku liita cusbada macdanta. Waqtiyadi hore, Aasiya waxay u arkeen harada Baikal inay tahay meel barakaysan. Xitaa maanta waxaad ku arkeysaa dhinacyada harada haro dhismooyin ay qabiilooyinkii hore ku dhaqmi jireen cibaadooyinka ay ku maalgeliyeen tamarta harada.
Dabeecad kale oo ka dhigaysa mid qaas u ah bulshada cilmiga leh ayaa ah xaaladaha cimilada daran ee laga helo. Xilliga jiilaalka heerkulka harada ayaa gaari kara illaa iyo 45 digrii. Si kastaba ha noqotee, Harada Baikal waa hoyga ubaxyada iyo xayawaanka. 1.600 hiddo oo xayawaan ah iyo 800 oo dhir ah ayaa wada nool oo illaa iyo hadda la kaydiyo. Dhexdeeda waxaa ku jira noocyo fara badan oo dabiici ah sida shaabadda iyo Baikal sturgeon, kalluunka golomjanka iyo kalluunka 'epishura' (xayawaan aad u yar oo doorkiisu muhiim u yahay silsiladda cuntada, maadaama ay biyaha ka marto jirkeeda) Doorka 'epishura' waa mid aad muhiim u ah maadaama ay tahay noocyo fara badan. Waxaa jira ilaa 3 milyan oo ka mid ah carsaanyadan halkii mitir laba jibbaaran oo dusha sare ah. Aad ayey uyar yihiin, dhererkooduna qiyaastii waa 2 milimitir, laakiin awooddooda ay ku sifeynayaan biyaha waa wax aan caadi ahayn Waad ku mahadsan tahay qayb weyn oo iyaga ka mid ah waa sababta harooyinka ay u cad yihiin. 1976dii, warshad gacanta ku haysay samaynta saxarka ayaa qashinkeeda si toos ah ugu daadisay harada Baikal iyo waxay halis gelisay badbaadada qafisyadan iyo noocyada kale ee cirib-tirka.
Harada Baikal Cars
Haradaasi way soo baxdaa sannad kasta qiyaastii laba sentimitir. Tani waxay keentaa dhulgariir fara badan sababtoo ah dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee taarikada tectonic. Haradaani waxay qaadi kartaa biyo badan sanad walba.
Xiisaha harada Lake Baikal
Qeybta hoose ee harada halkaas Ahraam bir bir ah oo leh jaakadaha gacmaha ee Ruushka. Tan waxaa u sabab ah safarkii ugu horreeyay ee socdaal ee ku guuleystay inuu gaaro gunta hoose ee harada 29-kii Luulyo, 2008.
Haradaani sidoo kale waxay caan noqotay ma aha sanado badan kahor mahadnaqa dhacdo kadhacday dusheeda oo markii ugu horeysay lagu arkay cirbixiyeenada Saldhigga Hawada Caalamiga ah (ISS). Dhacdadani waxay ka koobnayd astaan ​​weyn dusha sare ee harada (oo markaa barafoobay) aad ugu eg ta bidix galaas biyo ah miis. Calaamaddu waxay ahayd qiyaastii dhexroor 4,5 kiiloomitir ah. Dadka u heellan maadooyinka aan caadiga ahayn waxay yiraahdeen waxay ka dhalan kartaa faa'iidooyinka wax soo saarka UFO (iyadoo la raacayo caqli isku mid ah wareegyada dalagga).
Harada Baikal Lake
Dhinaca kale, bulshada cilmiga sayniska waxay si kooban u fahmeen isku xirnaanta dhacdadan. Waxay ahayd wareeg mugdi ah oo ka dhashay isku-biyoodka biyaha. Biyaha diirimaadka iyo cufnaanta yar ayaa kor uga kacay dusha markay markay la kulmaan qabowga deegaanka ayay barafoobaan iyagoo samaynaya lakab khafiif ah oo baraf ah. Khuraafaadka ugu badani wuxuu yidhi hadaad dhex mushaaxdo cidhifyada goobadaas waxay kugu dhici doontaa si la mid ah ifafaalaha saddexagalka Bermuda, waxaa kugu liqi doona mawjado aad u kacsan oo ka imanaya moolka gunta.
Dalxiiska Harada Baikal
Si aad u awoodo inaad booqato kuna raaxeyso Lake Baikal waxaad ku safri kartaa tareenka Trans-Siberian. Tareenkan gebi ahaanba way ku hareeraysan tahay, iyada oo ka gudbeysa illaa 200 buundo iyo illaa 33 godod. Dukaamada hareeraha harada ku dhex yaal waxay ku iibiyaan kalluun caba qiiqa oo waad ku raaxeysan kartaa intaad u kuur galeyso muuqaalka quruxda badan.
Qaybta koonfur-bari ee harada, shaki la’aan, waa tan ugu dalxiis badan tan iyo markii woqooyi-bari si ficil ahaan looga tago.
Harada Baikal iyo isbedelka cimilada
Daraasado badan oo cilmiyaysan ayaa muujiyay in saameynta ay isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka waxay ka dhigi karaan haro aad u xiiso yar. Mid ka mid ah daraasadahaas waxaa lagu daabacay joornaalka BioScience. Qoraaga baaritaankaan wuxuu ahaa Marianne V. Moore waxayna xustay in cimilada harada ay noqotay mid aad u fudud oo leh heerkul kala duwan oo aan ahayn sidii hore. Xilliga jiilaalka harada ayaa qaboojisa waqti aad uga yar sidii hore. Xaqiiqadani waxay dhaawici kartaa nidaamka deegaanka iyo xayawaanka ugu nugul sida shaabad nerpa. Shaabadani waxay tahay shaabadda kaliya ee biyaha macaan ee adduunka waana is waafajin kartaa oo ku dhalan kartaa barafka harada Baikal. Maaddaama barafkan uu jiro waqti ka yar, awoodda dhalashada iyo fursadda ayaa aad uga hooseysa tirada dadka shaabadana way yaraanayaan. Tan ayaa lagu daraa aadanaha. Dabcan, aadanaha ugaarsadaan shaabadood si qarsoodi ah oo ballaaran taasi oo ka mid ah saldhigyada ugu adag dhaqaalaha gobolka.
Shaabaddii nerpa waxay u baahan tahay baraf dhalidiisa. Xigasho: http://www.rdrusia.com/rusia-el-lago-baikal/
Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee haradaani waa inay tahay meesha kaliya ee aad ka heli karto neutrinos. Kuwani waa jajabyo si dhib yar looga helo Dhulka waxayna na siinayaan xog fara badan oo ku saabsan nolosha meerayaasha kale iyo galaxyada iyo waxa ka dhacaya bannaanka.
Sidaad u jeeddo, haradaan, bilow ilaa dhammaad, waxay la yaab ku tahay saynisyahannada iyo dalxiisayaasha labadaba. Marka waad xirxiran kartaa boorsooyinkaaga waxaadna abaabuli kartaa safarkaaga xiga 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Muxuu Lake Baikal caan ugu yahay?
Kuwani waa saldhigyada cimilada ee ugu wanaagsan ee la bixiyo Kirismaska
Baalal waaweyn oo ka dhashay isbeddelka cimilada